नेकपा संकटमा रहेको प्रचण्डको भनाई, के भने उनले पुष्पलाल स्मृति समारोहमा? – HostKhabar ::
नेकपा संकटमा रहेको प्रचण्डको भनाई, के भने उनले पुष्पलाल स्मृति समारोहमा?
काठमाण्डौं : शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पुष्पलाल स्मृति समारोहमा बोल्दै नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टी नेकपा अहिले संकटमा रहेको बताए ।
समारोहलाई सम्वोधन गर्दै उनले पार्टीको बैठक चलिरहेको समयमा निवार्चन आयोगमा नेकपा एमाले नामको अर्को पार्टी दर्ताको प्रक्रिया पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहल र सक्रियतामा भएको समेत बताए ।
पुष्पलालले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्नुभयो । तर, २००८ सालपछि उहाँलाई नेतृत्वबाट हटाइयो । पछि महासचिव बन्नबाट रोकियो । २०१४ सालमा पुष्पलालको नीति र विचार पारित भयो । पार्टी उहाँको नीति र विचारमा चल्यो तर नेतृत्व रायमाझी ९केशरजंग रायमाझी० को भयो । नीति एउटाको तर नेतृत्व त्यसका विरोधीको । तपाई हामीले यसो हेर्‍यौं भने अहिले पनि त्यस्तै भएको हो कि रु नीति र विचार एउटाको हुने तर नेतृत्व अर्कैको हुने भएको हो कि । आज हामीले भोग्नुपरेको समस्याको चुरो त्यतै कतै छ कि भनेर वरिपरी हेर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ । किनभने २०१४ मा पुष्पलालको जनवादी क्रान्तिको नीति पारित भएर पनि राजापरस्त रायमाझी आउने जुन प्रवृति देखियो आज पनि हामीले त्यस्तो नहोस् भनेर हेर्नुपर्ने छ । यदि त्यस्तै हुने हो भने १४ सालपछि जस्तो स्थिति आयो त्यस्तै हुनेछ । २०१४ सालपछि नीति एउटा र नेतृत्व अर्को भएपछि त्यो कम्युनिष्ट आन्दोलन दूर्घटनामा जाने नै थियो । त्यसमा कसैको पवित्र इच्छा हुँदैमा रोकिने कुरा होइन । वैज्ञानिक नियमअनुसार नै त्यो अघि बढ्छ ।
अहिले बिहानै बेलुकै समाचार सुन्दा कुन नहुने समाचार सुन्नुपर्ने हो भनेर जुन संन्त्रासयुक्त मन लिएर बस्नुपरेको अवस्था छ, यति छिटै, एकता प्रक्रिया नटुंगिँदै यस्तो अवस्था किन पैदा भयो रु आजको महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न यही छ । यसको जवाफ पार्टीमा खोज्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौं ।
कम्युनिष्ट पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर चल्ने पार्टी हो । त्यस्तो सामूहिक नेतृत्व हामीले विकसित गर्न सक्यौं कि सकेनौं रु दुई वर्षसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक गर्न सकेनौं । जब कि ६ महिनामा बैठक गर्नुपर्ने विधानमा छ । बैठकै नबसेपछि सामूहिक छलफल र निष्कर्ष भन्ने नै भएन ।
पछिल्लो दुई वर्षलाई हेर्दा कतै विवेकले सत्तालाई चलाउने नभइ सत्ताले विवेकलाई चलाउने अवस्था भएको हो कि रु समूहको अधिनस्थ व्यक्ति हुनेभन्दा व्यक्तिको अधिनस्थ समूह भएर जाने खतरा पो पैदा भएको हो कि ?
हामीले जनतालाई सुशासन दिन्छौं भन्यौं । तर श्रृंखलाबद्ध रुपमा उठिरहेका प्रश्नहरु र भ्रष्टाचारबारे उठिरहेका प्रश्नहरुको निरुपणमा हामी कति सफल भयौं रु हामीले विचारलाई प्राथमिकता दिने या पावरलाई भन्ने प्रश्नमा हामी कसरी गइरहेका छौं ? अघि यहाँ कुरा आयो- हुँदा हुँदा हाम्रो पार्टीमा त बैठक बस्न पनि निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने र बैठक बसिसकेपछि बैठकको ओज महत्व र गरिमलाई कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने डिबेटहरु पनि हामीले सुन्नु परेकै छ ।
तर, सरकारले त्यस किसिमको तयारी गरेको देखिएन । संसदमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन बिहान एकैछिन बसेको सचिवालय बैठकमा नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा पार्नै पर्‍यो भनेर भन्यौं । अन्त्यमा त्यही बैठकमा रहनु भएका प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यसमा सहमत हुनुभयो । त्यही बैठकबाट मूख्यसचिवलाई फोन गरेर प्रेसमा छापिइरहेको नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा जारी गर्ने कुरा थप गर्न लगाइयो । त्यो पार्टीको निर्णय थियो । एकजना कमरेडले भन्नुभयो, ुपार्टीको निर्णय सरकारले मानिदिँदा कति राम्रो हुने रहेछ त । नक्सा प्रकाशित भयो, संविधान संशोधन भयो । सारा नेपाली गौरवान्वित भए । जनतामा राष्ट्रिय एकताको भावना देखियो, सब एकताबद्ध भए । पार्टीको निर्णयबेगर सरकारले निर्णय गर्नखोज्दा कति धेरै विवाद आए, कतिधेरै अन्यौल जन्मिएु भन्ने कुरा राख्नु हुँदै थियो ।
यो कम्युनिष्ट पार्टीको सामूहिक विवेकको निर्णयको उपलब्धि हो । त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गरेकाले सरकार पनि धन्यवादको हकदार हो । यो पो सहि कुरा हो । अनि त्यही पार्टी जसले यो नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्यो निरन्तर सरकालाई दबाब दियो त्यो चाहिँ राष्ट्रघाती र दलाल, जुन सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्न यति ढिलो गर्‍यो त्यसको चाहिँ देवत्वकरण रु यो हुनसक्दैन । हामी सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा छ यो । त्यस्तो भयो भने त्यहाँ इमान्दारिता र पारदर्शिता हुँदैन । त्यहाँ विवेकले काम गरेको भन्ने हुँदैन ।
अहिले देशभरी केही कार्यकर्तालाई नाराजुलुशमा लगाउने काम भएको छ । हामी पार्टीलाई कसरी मिलाएर लैजाने, विवाद कसरी मिलाउने, राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा कसरी एकताबद्ध भएर जाने भन्ने छलफल र बहस गरिरहेका छौं, बाहिर जिन्दावाद र मुर्दावादका नारा लगाइएका छन् देशभरी । देशभरीबाट साथीहरुले हामीलाई सोध्छन्, हामी के गर्ने ? हामीले धैर्य लिनुस् र पार्टी एकताको पक्षमा उभ्भिनुस् भनेर भनेका छौं । तर, त्यसखालका प्रचारहरु भएका छन् । यसबाट पार्टी संकटमा छ भन्ने देखाएको छ । कान्तिपुर